Fialamboly sady harena - Akoholahy vidina an-tapitrisany ariary - L'Hebdo de Madagascar
Atody akoho miisa efatra amby roapolo no voan-dalana nentin-dRamarosandratana Marco na i Côcô nody teto an-tanindrazana, rehefa nahavita ny fianarany tany Belgique, ny taona 1983. Efa tia miompy sy mikarakara akoho ny raim-pianakaviana fony fahazaza.
T aranaka akoho « Thaïlandais » raha ny fanazavany ireo akoho ireo. Telo ambin’ny folo no foy rehefa nakotrika. Taranaka fahadimy sy fahenina no ompiany amin’izao fotoana izao. Telopolo taona mahery vao tapa-kevitra ny hivarotra akoho Ramarosandratana Marco fa tsy mahafoy mihinana na mampiady akoho.
Any ambanivohitry ny kaominin’Arivonimamo no mamboly sy miompy, hatramin’ny fahakeliny, Ramarosandratana Marco na i Côcô. Fialamboly sy fahafinaretana ho azy ny miompy akoho amam-borona. Nalefan’ny ray aman-dreniny nianatra tany Belgique raha afaka ny fanadinam-panjakana « Baccalauréat » ny lehilahy. Niverina teto an-tanindrazana rehefa nahavita ny fianarany ny taona 1983. Ankoatran’ny fahaizana noratovina dia nitondra atody miisa efatra amby roapolo natao voandalana izy. « Nataon’ny olona fihomehezana aho tamin’izay. F’angaha tsy misy atody aty Madagasikara ka atody no entina avy any. Tsy fantany anefa ny karazan’io akoho io », hoy ihany izy, te-hampiseho fa mijery lavitra izy eo amin’ny fiainana. Nampikotrehana tamin’ny reniakoho anankiroa teo an-tanàna ny atody efatra amby roapolo. Telo ambin’ny folo no foy soamantsara. Nanamboarana trano kely maromaro fa tsy navelany hihenjy. Tsy nitsaha-nitombo intsony ny isan’ny akoho.
Fahafinaretana sy fialambolin-dRamarosandratana Marco na i Côcô ny mikarakara sy manome hanina ny akohony. Ny fahadiovana no voalohandaharana, manaraka avy eo ny vaksiny ary ny fanomezana sakafo ara-pahasalamana. « Tsy miala ao an-trano raha tsy efa tapitra avy mihinan-kanina maraina ny akoho. Izaho mihitsy no manao ny fikarakarana fa tsy hianteherako amin’ny vady aman-janako. Miara-matory aminay ao an-trano rehefa amin’ny alina. Trano madio no vantanin’ireo akoho rehefa maraina ny andro », hoy izy mitanisa ny fikarakarany ny akohony raha mitaha amin’ny zanany. Mila fahafoizantena sy tsy fianteherana aman’olona ny fiompiana akoho.
Tsy tia mampiady akoho izy fa mampanofa akoho fotsiny. Niantoka ny saran-dalana sy ny sakafo ary ny efitrano fandriambahiny ireo mpanofa ny akohony. « Tsy tiako ho fantatry ny olona fa ahy ny akoho. Fandresena daholo mantsy no azo tamin’ireo telo niakatra kianja. Ankehitriny, tsy mampanofa akoho intsony aho. Hay hakan-dry zalahy taranaka fotsiny ny akoho fa tsy ampiadiany. Tsy mampaninona azy ny manome iray tapitrisa ahy hoe hofan’ny akoho, kanefa izy mahazo taranaka amin’ny akoho », hoy hatrany Côcô, tsy nahatakatra ny teti-dratsin’ireo mpanofa.
Tsy mbola resy hatramin’ny niakarany kianja ny akohon-dRamarosandratrana Marco. Any antoeran-kafa no mifanao fotoana rehefa handeha hampiady na hampanofa akoho. « Hatreto, tsy mbola misy olona nahita na mahalala ny toerana misy ny tranoko ry zalahy. Nanampy ny tsy nisian’ny fifaneraserana ihany koa ny fahaverezan’ny finday. Very any avokoa ny laharana sy anaran-dry zalahy dia zarako aza. Mety ho vitan-dry zalahy mihitsy ny manafika any an-tokatranono. Mila mailo », hoy Ramarosandratana Marco.
Samy hafa ny olona miandraikitra ny akoho iray rehefa eny an-kianja. Misy ny mpampiady, ny mpanera, ny mpiloka… Amin’ireo mpijery dia misy ny mpitsikilo ny tena tompon’ny akoho. « Mody manao sari-mamo ry zalahy dia mampiresaka anao. Raha sanatria ka fantany fa ianao no tompon’ny akoho, vitany ny manaradia anao na aiza na aiza. Vao jereny fotsiny ny bikan’ny akohonao dia fantany tsara fa karazan’akoho mpiady. Mila mailo rehefa hampiady akoho fa misy manao fanafody ry zalahy. Tonga dia mitsoaka ny akohonao vao mifandona kely fotsiny », hoy hatrany Côcô.
Hatreto, manampy amin’ny fidiram-bola ao an-tokantranon-dRamarosandratana Marco ny fiompiana akoho. « Ilaina fitandremana ny fikarakarana ny akoho, mba hampisongadina azy amin’ny akoho hafa. Miavaka tokoa ny akoho voakarakara na amin’ny bikany na amin’ny vidiny », hoy ity raim-pianakaviana, mivelona sy miara-miaina amin’ny akoho. Indray mandeha no nihinana ny akoho niompiany, Ramarosandratana Marco, tao anatin’izay telopolo taona nilomanosany tamin’ny fiompiana akoho raha ny fanamarihany. Azo antsoina amin’ny laharana 033 70128 17 raha misy mahaliana na amin’ny fikarakarana ny sakafo na ny vidin’ny zanaka akoho, ary ny akoho lehibe izay mahatratra an-tapitrisa ny iray